Pelvic Pain (ဆီးခုံနာကျင်ခြင်း) - Hello Sayarwon
Pelvic Pain (ဆီးခုံနာကျင်ခြင်း)
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Pelvic Pain (ဆီးခုံနာကျင်ခြင်း)
Pelvic Pain (ဆီးခုံနာကျင်ခြင်း) ကဘာလဲ။
ဆီးခုံနာကျင်ခြင်းဆိုသည်မှာ သင့်ဝမ်းဗိုက်ရဲ့အောက်ဆုံးအပိုင်း ၊ ချက်အောက်ပိုင်း ဆီးခုံနေရာတွင်အတွင်းဘက်မှနာကျင်မှုမျိုးဖြစ်ပါတယ် ။
ဆီးခုံနာကျင်ခြင်းတွင်ရေတိုနှင့် ရေရှည်နာကျင်ခြင်းနှစ်မျိုးရှိပါတယ် ။
Pelvic Pain (ဆီးခုံနာကျင်ခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
ဆီးခုံနာ.ကျင်ခြင်းဟာအရမ်းအဖြစ်များပါတယ်။ အမျိုးသမီးများဟာအမျိုးသားများထက်အဖြစ်များပြီး ဆယ်ကျော်သက်မှသက်ကြီးပိုင်းအထိအသက်အရွယ်မရွေးဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။ အန္တရာယ်ရှိသည်များကိုရှောင်ရှား၍ ရောဂါဖြစ်နိုင်ချေကိုလျှော့ချနိုင်ပါတယ် ။ အသေးစိတ်သိရှိရဖို့ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်သင့်ပါတယ် ။
Pelvic Pain (ဆီးခုံနာကျင်ခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
နာကျင်မှုဟာ အသေးစားနာကျင်မှုကနေ အပြင်းအထန်နာကျင်မှုအထိလူတစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်မတူနိုင်ပါဘူး။ စူးစူးရှရှနာကျင်နိုင်သလို နေရာတစ်ခုလုံးလည်းနာကျင်နိုင်ပါတယ် ။ ဆက်တိုက်နာကျင်နေနိုင်သလို ခဏခဏနာကျင်တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။ ဆီးခုံနာကျင်ခြင်းဟာ အခြားရောဂါလက္ခဏာတွေဖြစ်တဲ့ဆီးမထိန်းနိုင်ခြင်း ၊ ဖျားခြင်း ၊ ခါးနာခြင်း နှင့် နှလုံးခုန်မြန်ခြင်းတို့နှင့် တွဲလာတတ်ပါတယ် ။
အထက်မှာဖော်ပြမထားတဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေလည်းရှိနိုင်ပါသေးတယ် ။ ရောဂါလက္ခဏာတွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီးသိချင်သေးရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
– လိင်ဆက်ဆံရာတွင်အခက်အခဲရှိခြင်း၊လိင်စိတ်ပြီးမြောက်ရန်ခက်ခဲခြင်း၊ လိင်အင်္ဂါထောင်မတ်မှူနှင့် သုတ်လွှတ်မှုများအားနည်းခြင်း ၊
– ဝမ်းချုပ်ခြင်း ၊ ရေရှည်ဆီးမထိန်းနိုင်ခြင်း ၊
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ် မှာဆီးခုံနာကျင်ခြင်းဟာကိုယ်ဝန်ပြဿနာတွေရဲ့လက္ခဏာတစ်ခုခုဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။ နေရာမှား၍သန္ဓေတည်ခြင်းနှင့် ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခြင်းများတွင်နောက်ဆက်တွဲဆိုးရွားသောပြဿနာများမဖြစ်စေရန် ချက်ချင်းခွဲစိတ်မှုခ့်ယူရန်လိုအပ်ပါတယ် ။
Pelvic Pain (ဆီးခုံနာကျင်ခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများတွင်ဆီးခံနာကျင်ခြင်းဟာ ဆီးအိတ်၊ အူများ ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆောင်ရွက်ချက်များအားနည်းခြင်း သို့ အူလမ်းကြောင်းပိတ်ခြင်းတို့ရဲ့ရောဂါလက္ခဏာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အူအမြှေးရောင်ခြင်းနှင့် ပိုးဝင်ခြင်းတို့အထိဆက်ဖြစ်မယ်ဆိုလျှင်တော့ အသက်အန္တရာယ်ရှိသည်အထိဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။ အခြေအနေအမျိုးမျိုးကြောင့်လည်းမျိုးပွားလမ်းကြောင်းပြဿနာရှိသောဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးများတွင်ဆီးခုံနာကျင်ခြင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဟာပျိုဖော်စဝင်ပြီး ရာသီလာတာနှင့်အမျှ ဆီးခုံနာကျင်မှုအတွက်ရောဂါရှာဖွေရတာလည်း ကျယ်ပြန့်လာပါတယ် ။ အမြင့်မှပြုတ်ကျခြင်း သို့ ကားမတော်တဆမှုဖြစ်ခြင်းကဲ့သို့သော မတော်တဆမှုများကြောင့်လည်း အသက်အန္တရာယ်ရှိသော ဆီးခုံနာကျင်မှုများအထိဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။
အမျိုးသမီးများတွင်နာတာရှည်ဆီးခုံနာကျဉ်ရခြင်းများကတော့ သားအိမ်တွင်အလုံးဖြစ်ခြင်းကဲ့သို့သော လိင်အင်္ဂါများကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် ။ တစ်ခါတစ်ရံမှာနာကျင်မှုဟာ အနည်းဆုံး၆လအထိကြာနိုင်တဲ့ဆီးအိတ်သို့ အူလမ်းကြောင်းပြဿနာများနှင့် ဆက်စပ်နေပါတယ်။ နာကျင်မှုဟာရာသီလာချိန်မှာဖြစ်နိင်သလို တခြားအချိန်မှလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။
သားအိမ်ဖယ်ခြင်း ၊ Cပုံစံခွဲစိတ်ခြင်း၊ဆီးကျိတ်ခွဲစိတ်ခြင်းနှင့် များစွာသောဝမ်းဗိုက်ခွဲစိတ်မှုများ ၊အတိတ်က ကင်ဆာဓါတ်ကင်မှုများ.. အစရှိသည်တို့ကြောင့်လည်း ဆီးခုံနာကျင်ခြင်းများ ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။
Pelvic Pain (ဆီးခုံနာကျင်ခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
– ရာသီမလာခြင်းဟာတော့ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာဆီးခုံနာကျင်ခြင်းဖြစ်စေတဲ့အများဆုံးအကြောင်းရင်းတစ်ခုပါပဲ။ ဆီးခုံနေရာတစ်ဝိုက်တွင်ကူးစက်ခံရခြင်းများ၊ သားဥကြွေခြင်းကြောင့် ရာသီလာနေစဉ်အလယ်လောက်တွင်နာကျင်ခြင်း ၊ ဆီးလမ်းကြောင်းကူးစက်မှုများ ၊ ကျောက်ကပ်တွင်ကျောက်တည်ခြင်းများ၊ဝမ်းချုပ်ခြင်း ၊ အစာလမ်းကြောင်းတွင်ရောဂါကူးစက်ခံရခြင်း၊ဗိုက်နာခြင်းများ ၊ နေရာမှား၍သန္ဓေတည်ခြင်း သို့ ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခြင်းများ၊ ဆီးအိတ်ရောင်ရမ်းခြင်း၊ သားအိမ်နံရံသည်အခြားနေရာများတွင်ကြီးထွားလာခြင်း၊ အူမကြီးရောဂါကူးစက်ခံရခြင်း၊ဆီးခုံနေရာတစ်ဝိုက်မှကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများပြုတ်ကျခြင်း တို့ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Pelvic Pain (ဆီးခုံနာကျင်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ဆီးခုံနာကျင်ခြင်းကို ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်း၊ အယ်လ်ထရာစောင်း သို့MRI ရိုက်ခြင်း ၊ ကျောရိုး ၊ဆီးခုံနှင့် တင်ပါးတို့ကိုဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်း၊ ကြွက်သားကျုံ့မှုများ ၊ကြွက်သားများသေးခြင်း ၊ တစ်ရှူးများ၏ခံနိုင်ရည် ၊အနာရွတ်များ အတွက်ကြွက်သားတုံ့ပြန်မှုကို စစ်ဆေးခြင်း ၊ ဝမ်းဗိုက်ကြွက်သားကောင်းမကောင်းစစ်ဆေးခြင်း၊ ဆီးခုံရှိကန့်လန့်ကာကြွက်သားကြံ့ခိုင်မှုရှိမရှိ စစ်ဆေးခြင်း၊ ကန့်လန့်ကာကြွက်သားလိုက်လျောညီထွေစွာအလုပ်လုပ်နိုင်ခြင်းရှိမရှိ စစ်ဆေးခြင်း ၊ ဆီးအိတ်ရောဂါပိုးကူးစက်မှုများရှိမရှိသိနိုင်ရန် ဆီးစစ်ခြင်း ၊ သွေးဆဲပမာဏများနှင့် ရောင်ရမ်းခြင်းအတွက်အမှတ်အသားများကိုစစ်ဆေးခြင်း ၊ လိင်မှတစ်ဆင့်ကူးစက်ရောဂါများရှိမရှိစစ်ဆေးခြင်း တို့ပဲဖြစ်ပါတယ် ။
Pelvic Pain (ဆီးခုံနာကျင်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ကုသရာတွင် နာကျင်ခြင်းကိုဖြစ်စေသောအကြောင်းအရာအပေါ်မူတည်၍ကွဲပြားသွားကြပါတယ် ။ ကုသခြင်းများကတော့..
– နာကျင်မှူသက်သာစေသောဆေးများပေးခြင်း ၊
– ကိုယ်ဝနိတားဆေးများပေးခြင်း ၊
– သင့်ရဲ့ကြွက်သားများကိုထိန်းချုပ်ရန် နည်းစနစ်များအသုံးပြုခြင်း၊
– ဆီးခုံပတိဝန်းကျင်ရှိ ကြွက်သားများပြေလျော့စေရန် အပ်စိုက်ခြင်း သို့ နှိပ်နယ်ခြင်း ၊
– နာကျင်မှုကိုသက်သာစေမည့် ကုသမှုများ ၊ နည်းလမ်းများကိုလေ့လာခြင်း ၊
– လျှပ်စစ်အသုံးပြု၍ နာကျင်မခံစားရအောက်လုပ်ခြင်း၊
– လိုအပ်လျှင် နာကျင်မှုဖြစ်စေသောနေရာကိာခွဲစိတ်ကုသခြင်း၊
– အကယ်၍ နာကျင်မှုသည် ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်အတွင်းသမားရိုးကျ ပြောင်းလဲမှုများကြောင့်ဆိုလျှင် ဆရာဝန်သည် နာကျင်မှုသက်သာစေရန် အနားယူခြင်း ၊လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း ၊ အပူကပ်ပေးခြင်း..အစရှိသည်တို့ကိုလုပ်ခိုင်းပါလိမ့်မယ်။
ဘယ်လိုနေထိုင်မှုပူံစံတွေနဲ့ အိမ်တွင်းကုသမှုတွေက ဆီးခုံတွင်နာကျင်ခြင်းကိုသက်သာစေသလဲ။
– ကုသမှုခံယူပြီးနောက်ပိုင်း ရောဂါမသက်သာလျှင်ဆရာဝန်ကိုပြောရပါမယ် ။
– ဆေးသောက်နေစဉ် သက်သာသည်ဟုမခံစားရလျှင် အခြားဝေဒနာများထပ်ပေါ်လာလျှင်လည်းဆရာဝန်ကို ပြောရပါမယ်။
– အကယ်၍နေကောင်းသွားလျှင်တောင် ဆေးများကိုဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားသည့်အတိုင်းဆက်လက်သောက်သုံးပေးရပါမယ်။
– ဆေးများနှင့် အစားအစာများမစားသုံးခင် ဆရာဝန်ကို အရင်မေးမြန်းသင့်ပါတယ် ။
Lamvu G, Steege JF. The anatomy and neurophysiology of pelvic pain. J Minim Invasive Gynecol 2006. Medical Program content.
Barnhart KT, Sammel MD, Gracia CR, et al. Risk factors for ectopic pregnancy in women with symptomatic first-trimester pregnancies. Fertil Steril 2006.
Cervero F, Laird JM. Visceral pain. Lancet 1999. Download version.
Pelvic Pain Rehab By Anelyn Delmonte-Purifoy, PT Civilian Supervisor of Physical Therapy Fort Belvoir Community Hospital in Virginia.